'Sesingagoduka-ke manje', kusho abaseZimbabwe abahlala eGoli | News24
'Sesingagoduka-ke manje', kusho abaseZimbabwe abahlala eGoli
Johannesburg - Amakhulu abantu baseZimbabwe abafudukela eNingizimu Afrika bebalekela indlala nokusweleka kwemisebenzi ngaphansi kukaRobert Mugabe, bangene emigwaqeni yaseGoli bebhiyozela ukwesula kukalo mengameli obengathandwa.
Bekufuthwa amavuvuzela, kubhakuziswa amafulegi aseZimbabwe eHillbrow, okuyindawo enabantu abaningi bokufika eGoli.
"Sifuna ukubuyela ekhaya, nakusasa nje uma kungenzeka. Ngijabule kakhulu," kusho uNikiwe Khumalo, 60, etshela i-AFP, ngemuva kweminyaka engu-36 ashiya eZimbabwe "eyozama impilo" eNingizimu Afrika.
Ngaphansi koMbuso kaMugabe izwe labhekana nomnotho ontengayo, ukuswelakala kwemisebenzi kanye nobubha kulandela ukuxoshwa kwabalimi abamhlophe kwashaqwa namapulazi abo, okuyinto eyaholela ekutheni kungabikhona ukudla okukhiqizwayo.
OLUNYE UDABA: BUKA: Umengameli waseBotswana edansa kumenyezelwa ukuthi uMugabe usesulile
Ngenxa yempilo engeyinhle eZimbabwe, izakhamuzi eziningi zafudukela eNingizimu Afrika zizozama impilo.
Kuthe ngemuva kokwesula kukaMugabe ngoLwesibili, ababhikishi bagcwala imigwaqo yaseGoli bejabulela ukuthi "sebekhululekile".
"Sizophindela emuva siyokwakha kabusha iZimbabwe entsha nengcono...siyosebenza, sivule namabhizinisi," kusho owesilisa othe igama lakhe nguRuben.
Abazali bakaCleopatra, 16, bafika eNingizimu Afrika engakazalwa kanti ukwesula kukaMugabe kusho ukuthi uzothola ukuvakashela izwe adabuka kulona.
"Ngifuna ukuphindela ezweni lokhokho. Angikaze ngiye eZimbabwe," esho.